ILogitech Ingenisa Igundane Layo Elisha le-G502 Lightspeed Wireless | Izindaba zamagajethi
ILogitech yethula igundane layo elisha elingenantambo le-G502 Lightspeed
UJordi Gimenez | | Izinsimbi
Edolobheni elihle laseBerlin, inkampani yethule eyayo igundane elisha elingenantambo le-Logitech G502 Lightspeed. Le Logitech ingenye yamamodeli adingeka kakhulu phakathi kwalabo basebenzisi abathanda ukudlala futhi iphelele kulabo abahlanganyela ngendlela yobungcweti noma bamane nje bazijabulisa. Okuyilokhu iningi lalaba badlali beliyibuza le nkampani isikhathi eside yikho kanye ukuthi ihambe ngaphandle kwezintambo futhi izolo yikho kanye okwenzekile.
Futhi Le Logitech G502 Lightspeed entsha efakiwe ikhonjiswa ngokwakhiwa kabusha kusuka phansi kuya phansi nokuncipha kwesisindo esingu-gram ayisikhombisa okwenza kube nokwenzeka ukuhlanganisa ukunemba nokusebenza kobuchwepheshe obungenawaya obunobuchwepheshe ngomklamo ohlonishwe kakhulu nokusebenza okuphezulu ngayo yonke indlela.
1 Umcimbi wokwethulwa ububanjelwe eRiot Games Studios eBerlin
2 Intengo nokutholakala
Umcimbi wokwethulwa ububanjelwe eRiot Games Studios eBerlin
Lokhu sekuvele kuyisibonakaliso esicacile senhloso engxenyeni yeLogitech ekhombisa ukuthi i-100% izinikele ekudlaleni nasekuhlanganeni kwayo ne-eSports. Lo mcimbi ngokwawo ubuhanjelwe nguCarlos "Ocelote" Rodriguez, umsunguli nomphathi omkhulu we-G2. Futhi ungumnikazi Iphini Likamongameli kanye ne-CEO yeLogitech Gaming, Ujesh Desai, wathi:
Ngaphandle kokungabaza, alikho igundane elifanekisela uthando lomhlaba wonke esinalo nabadlali bamageyimu nabadlali abanethimba labo kune-G502 yethu. Njengoba sethule igundane lethu lokuqala lokudlala i-LIGHTSPEED, abalandeli bebelokhu besibuza ukuthi sizoyikhipha nini inguqulo entsha ye-G502. Namuhla sethula lokho abasicele kona, nokuningi.
Umklamo omusha nobuchwepheshe obungenawaya be-LIGHTSPEED ne-POWERPLAY obenza le gundane elisha elingenantambo licacise kakhulu imidlalo yeLogitech G PRO nazo zonke izinhlobo zemidlalo. Ngokusobala futhi ingeza inzwa esebenza kahle kakhulu ye-16K HERO isizukulwane sokugcina. Lokhu kube ukuxhumana kokuqala ngemodeli entsha yeLogitech, sethemba ukuthi sizowubuyekeza umkhiqizo maduze ngemibono yethu yokuqala nemininingwane eminingi.
Izolo nje ngemuva kokwethulwa kwalo ngokusemthethweni kumenyezelwe intengo nokutholakala kwayo emakethe. ILogitech ayiphumelelanga futhi igundane lokudlala ngokungenantambo leLogitech G502 kulindeleke ukuthi litholakale ngokomthetho ku LogitechG.com nasezitolo ezijwayelekile emhlabeni jikelele ngayo le nyanga kaMeyi. Mayelana nentengo yomkhiqizo, sizobe sikhuluma ngamanye intengo ngama-euro angu-149, intengo eqinile yegundane nalezi zici.
Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi manje sesingathola imodeli edlule ngentambo ezitolo ezifana ne-Amazonngokunciphisa okuthakazelisayo kwentengo yayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amakhompyutha » Izinsimbi » ILogitech yethula igundane layo elisha elingenantambo le-G502 Lightspeed